Author: Tygogore Mauran
Habka loo Raaco Xeer-dejinta. Qof kastaa waxa uu xaq u Ieeyahay in uu si gaar ah u yeesho hanti, taas oo ay shardi tahay in uu ku helo waddo xalaal ah.
Xubinta Golaha Wakiilada loo qaban maayo, waxna loogu qaadi maayo arrin uu ogaaday ama uu Golaha soo hor-dhigay ama arrimo uu ra’yi ka dhiibay. Haddii Madaxweynuhu ku qanco warbixinta waxa uu Wasiirka ama Wasiir-ku-xigeenka ka xayuubin doonaa dhowrsannaanta.
Hoyga iyo meelaha kale ee la deggan yahay waxay leeyihiin xurmayntooda; mana bannaana basaasiddooda, baadhidooda iyo geliddooda, haddaanu jirin amar garsoore oo sababaysan.
Qodobka aad-Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha. Cutubka 12aad Heerarka kala Duwan ee Shaqaalaha dowladda ee Rayidka. Golaha Guurtida Jamhuuriyadda Somaliland, oo ah Golaha Odayaasha, waa Qaybta 2aad ee Xeer-dejinta waxaanay dib u eegaan xeerarka ka soo baxa Golaha Wakiilada intaan Madaxweynaha loo gudbin; wuxuuna gaar u leeyahay dejinta xeerarka ku saabsan Diinta, dhaqanka iyo nabadgelyada.
Labada Gole ee Baarlamaanku fadhiyo wadajir ah ayey ka yeelanayaan arrimaha ay ka mid yihiin: Wasiirada ama Wasiir-ku-xigeenadu ma qaban karaan shaqo kale oo ka baxsan tan Qaranka. Lama xidhi karo garsoore ama ku-xigeen Xeer-ilaaliye Guud haddii aanay Guddida Cadaaladdu oggolaanin, hase yeeshee looma baahna oggolaanshaha Guddida haddii garsooraha ama Ku-xigeenka Xeer-ilaaliyaha Guud la qabto isaga oo faraha kula jira dembi ciqaabtiisa ugu yari ay tahay 3 saddex sannadood oo xadhig ah.
Bixinta astaamaha xurmo iyo sharaf ee ay ka mid yihiin billadaha. Waxa si gaar ah loo dhiirri gelinayaa fanka, suugaanta iyo ciyaaraha wadaniga ah, iyadoo Ia dhawrayo aadaabta lslaamka.
Xoghayaha Golaha iyo La-taliyayaal. Guddoomlyaha gobolka waxa soo magacaabaya Xukuumadda, waxaana uu uga wakill yahay Xukuumadda-dhexe gobolka iyo degmooyinka hoos yimaada. Somaliland 26kii Juun k iyo ka hor, waxa loo aqoonsanayaa muwaadin. Qodobka 98aad-Xil-ka-qaadista Madaxweynaha 1 Madaxweynaha Jamhuuriyadda waxaa xilka looga qaadi karaa dastukrka keliya marka uu ku xadgudbo dastuurka, ku tagri-falo awooda xafiiska ama uu galo khiyaamo qaran.
Meeshii ay suuraggal tahayna waa in xukuumaduhu si wadajir ah ay mashaariic wadaag ah uga dhaqan-geliyaan. Taliyayaasha ciidamada iyo Ku-xigeenadooda.
Waxa kale oo uu yeelan karaa la-taliyayaal uu ka mid yahay La-taliye Sharci. Ammaanka ayaa aad loo adkeeyeycabsi laga qabo dastkurka si la mid ah dii ay rabshado ka dhacaan dalka. Qodobka aad-Bannaanaanta Xaafiiska Madaxweyne-Ku-Xigeenka Madaxweyne ku-xigeenka haddii uu geeriyoodo, iscasilo ama xilka laga qaado A fhayeenka Golaha Shacbiga ayaa la wareegaya xilkiisa.
Labada Gole ee Baarlamanku waxay yeelanayaan fadhiyo ay wadaagaan iyo kuwo gaar u kala dasruurka.
Aafooyinka dhaca sida abaaraha, duufaanada, cudurrada faafa, dhul garurka iyo dagaalada waxay Dawladdu ka yeelanaysaa ku-talagal. Inuu yahay muwaadin, maskax ahaan iyo jidh ahaanba u gudan kara xilkiisa. Shir ku saabsan dastuurka cusub ee Soomaaliya oo soo idlaaday iyada oo uu madaxweynuhu ballan qaaday in la dardar gelin doono hannaanka dib-u-eegista. Waxa Qaranku yeelanayaa Waax Garsoor, oo hawsheedu ta hay u gar-naqa dastuukra dhaxeeya Dawadda iyo dadka; iyo dadka dhexdooda.
Calanka Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu ka kooban yahay saddex midab oo isle’eg oo ballaadh u goglan. Soomaaliya hadda waxaa ay ku dhaqantaa Dastuur Qabyo ah, soosaarista dastuur cusub rasmi ah ayaa la filayaa ka hor inta aysan dastuuroa ka qabsoomin doorasho qof iyo codkiisa ah sannadka ka. Muddada xilka dastuuurka gobollada iyo degmooyinka waa shan sano 5. Tusmada Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland.
Madaxweynaha iyo Csub Madaxweynaha ayaa leh hab maamuuska koowaad ee Qaranka. Dib-u-eegidda xeerarka Golaha Wakiiladu ansixiyo xeerka maaliyadda mooyaane, waxaanu ku celin karaa Golaha Wakiilada hal mar, muddo 30 soddon maalmood gudahood oo ka bilaabanta maalinta loo soo gudbiyo xafiiska Shir-guddoonka Golaha Guurtida, isagoo sababaha aragtidiisa qoraal ahaan ugu gudbinaya.
Hadiyadaha la siiyo Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha iyo Marwooyinkooda iyo Madaxda sare ee Qaranka ee Ieh muuqaal Qaran iyada oo lagu maamuusayo xilka ay hayaan fastuurka weeye hanti Qaran. Haddii doorashada Golaha Wakiiladu ku qabsoomi weydo duruufo adag awgeed, Golaha hore ayaa xilka sii haynaya inta ay ka dhamaanayso duruuftaasi, lagana dooranayo Gole cusub.
Cutubka 1aad – Baaqa Jamhuuriyadda. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dhawraysaa heshiisyadii ay Dawladdii hore 1o odhan jiray Soomaaliya la gashay shirkad ama dawlad shisheeye, haddii aanu ka hor imanayn danta iyo maslaxadda Jamhuuriyada Soomaaliand.
Daryeelka iyo ilaalinta maalka iyo awqaaffa iyo hantida guud waa waajib saaran Dawladda iyo muwaadiniinta, waxaana geexaya xeer. Magacaabidda iyo xil-ka-wareejinta xubnaha Golaha Wasurada.
Waxa reebban in qofka lagu xidho meel dastuurla xeerku bannayn. Magacaabidda Xubnaha Guddida Culimada. Waxa waajib ah in si toos ah loogu akhriyo amarka garsaooraha mulkiilaha ama degganaha hoyga inta aan la gelin.
Dawladdu waxay horumarinaysaa hiddaha iyo dhaqanka suubban ee bulshada iyada oo isla markaa laga faa’iidaysanayo aqoonta bulshada adduunka. Xubintu istiqaalad dhiibto, iskeedna shaqada uga tagto; Goluhuna ka oggolaado; 3.
Mashruuc-sharci Baarlamaanku oggolaadeen wuxuu xeer dhaqan gal ah noqonayaa marka uu Madaxweynuhu u soo saaro hab waafaqsan Dastuurka. Dalka Masar tusaale ahaa sanadkii kii waxaa doorashada laga reebay Sheekh Xaasim Abuu Ismaaciil, ma aheyn in Sheekh Xaasim uu dhalasho kale heystay laakin waxaa looga reebay markii la ogaaday in hooyadiis ay heshay Green Card mar ay booqasho ugu tagtay gabadheeda oo deganeyd dalka Mareykanka.
Astaanta Jamhuuriyadda Soomaaliya, sida lagu cuaub qaybta B ee jadwalka koowaad, waxay ka kooban tahay gaashaan buluug ah oo leh xiddaayad dahabi ah, dhexdana ku leh xiddig shangees ah oo dheeh qalin ah leh.